Wararka - Kahortagga iyo xakamaynta cudurrada _ aqoonta ka hortagga cudurrada
Kahortaga iyo xakamaynta aafooyinka _ Aqoonta kahortaga cudurada
Qiyaasta Ka Hortagga Cudurrada Novel Coronavirus
1 、 Sidee ayay dadweynaha guud ahaan isaga difaaci karaan cudurka oof-wareenka cusub ee faafa?
1. Yaree booqashooyinka meelaha dadku ku badan yahay.
2. Si joogto ah hawo u sifee qolkaaga guriga ama shaqada.
3. Markasta xiro maaskaro markaad qandho ama qufac qabto.
4. Si joogto ah u dhaq gacmahaaga. Haddii aad afkaaga iyo sankaaga ku daboosho gacantaada, marka hore dhaq gacmahaaga.
5. Ha xoqin indhahaaga ka dib hindhisada, qaado ilaalin shakhsi ahaaneed iyo nadaafad.
6. Isla mar ahaantaana, dadweynaha guud ahaan uma baahna muraayadaha indhaha xilligan, laakiin waxay isku difaaci karaan waji-shareerka.
Feejignow oo Ilaali
Fayraskani waa sheeko cusub oo loo yaqaan 'Coronavirus' oo aan waligeed la arag. Waxqabadka heerka koowaad ee xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka bulshada.Waxaan rajaynayaa in dadwaynuhu ay sidoo kale fiiro gaar ah u yeeshaan oo ay shaqo fiican ka qabtaan ilaalinta.
3. Sidee loo sameeyaa safar shaqo?
Waxaa lagugula talinayaa inaad tirtirto gudaha iyo albaabka gawaarida rasmiga ah hal mar maalintii khamriga 75%. Basku waa inuu xirtaa maaskaro. Waxaa lagugula talinayaa in basku ku tirtiro albaabka albaabkiisa iyo albaabkiisa khamri 75% isticmaalka kadib.
4. Xiro maaskaro si sax ah
Maaskarada qalliinka: Waxay xannibayaan ilaa 70% bakteeriyada. Haddii aad tagto meelaha caamka ah adigoon laxiriirin dadka jiran, maaskaro qalliin ayaa kugu filan.Maskaxyada difaaca jirka (N95 mask): waxay xanibi kartaa 95% bakteeriyada, haddii aad laxiriirto bukaanku waa inaad doorataa midkaan.
Qorsheynta kahortaga faafa ee hormarinta, amaanka wax soo saarka dhamaantood si adag ayey uqabsadaan.Maalinta dagaalka, ha noqonin mid dabacsan; waqtiyada kahortaga iyo xakamaynta, samee shaqo wanaagsan.Si loo ilaaliyo amaanka ayaa laqabtaa, weichuang ayaa berito kafiicnaan doonta !!!
Waqtiga boostada: Jun-05-2020